Author Topic: GUDNIINKA FIRCOONIGA IYO CAAFIMAADKA (Read 39970 times)
« on: April 11, 2009, 05:40:21 PM »
Waxa la sheegaa inuu gudniinkani bilowday waqtigii Faraaciinta Masar, ka dib markii reer Bani-israa'il oo waqtaasi la gumeysan jirey nin faalalow ahi u sheegay boqorki xilligaas inuu talada kala wareegi doono wiil ka dhalan doona dadka ay gumeystaan. dabadeedna uu amar ku bixiyey in la (gudo) oo la tolo dhamaan naagahooda, waxana muhiimadaasi qabanayey Umulisooyin la shaqeenayey boqortooyada, si loo kantaroolo guur-kooda, uurkooda iyo dhalitaankooda, ka dibna wixi wiil ah oo xiligaasi dhasha lagu amri jirey in la dilo.
WADAMADA LAGA ISTICMAALO GUDNIINKA FIRCOONIGA
Wadamada isticmaala dhaqankan waxa ugu horeeya Masaarida iyadoo ah meeshii ay ka bilaabatay inkastoo sanadihii u danbeeyay ay hoos udhacday tirada dadka isticmaala oo gaartay ilaa boqolkiiba 54%.
Wadanka SUDAN oo deris la ah dowladda Masar isagana aad baa looga isticmaalaa waxay gaareysaa ilaa boqolkiiba 80%.
1.Waxa la jaraa Kintirka (Clitoris).
3.jaridda kintirka + faruuryaha + tolliin.
Saddexdaasi nooc ayaa intaba laga isticmaalaa soomaliya, inkastoo nooca u danbeeya aad looga isticmaalo waddanka SUDAN.
Waxa ka mida dhiig-bax fara badan oo sababi kara dhiig-yari
In la jaro qaar kamida kaadi-mareenka sida ibta oo kale (Urethra)
Xanuun daran waqtida gudniinka oo sababi kara suuxdin
Huritaan ama nabarka oo infekshan qaada
Kaadida oo ku dhegta (Incarceration of urine)
U gudbin cudurada faafa sida Teetano qalabka oon nadiif ahayn dartii.
B- Dhibaatooyinka Mustaqbalka:
Dhiigga-Caadada oo ku adkaada
Foosha oo ku cuslaata (Obstructed Labor)
Xanuun xilliga galmada
Dhibsasho galmada himiga jinsiga oo yaraada awgii
Furitaanka lammaanaha is qaba oo siyaada
FAA'IIDADA UU KINTIRKA U LEEYAHAY DUMARKA
Waxan shaki ku jirin in waxkasta oo ilaahay abuuray uu xikmad iyo macna weyn ku fadhiyo, Dhakhaatiirka anotimiga waxay sheegaan inuu kintir-ku u dhigmo qooraha ragga, waayo wuxu leeyahey Nerve iyo xididdo, waxyaala uu qabtana waxa ka mida, inuu Siilka (taranka dumarka) u yahay dabool, marki la jarana waxa dhici kara iney bekteeriyo iyo jeermis fara badani u godbo ilma-galeenka.
Waxuu kaloo ka qeybtaa dareenka galmada, oo haddii la jaro way yaraataa himmada haweenta.
DHAQANKA SOOMAALIDA IYO FIKIRKA KU AADAN GUDNIINKA
Re: GUDNIINKA FIRCOONIGA:
« Reply #1 on: May 10, 2011, 01:29:26 PM »
Waxaan rabaa inaan wax yar ka jaahil baxo sedexda nooc aad u qeybiseen Gudniinka:-
1. waxa la jaraa Kintirka (Clitoris)= kan ma waxaa ula jeedan kan Sunniga la yiraahdo? ??
2.Jaridda kintirka + faruuryaha yaryar iyo faruuryaha waaweyn (Labia Minora & Labia Majora). =kan labaad maxa waxaa u la jeedan ka la yiraahdo Suno kabiir.
3.jaridda kintirka + faruuryaha+ tolliin =kane ma waxaa u la jeedan Fircooniga nooca ugu xun. ama kan fircooniga saxda lagu tilmaamo.
« Reply #2 on: May 11, 2011, 02:42:40 PM »
Sadaxda nooc aad xustay waa gudniin fircooni ah.
Gudniinka sunniga waa in wax yar laga saro qeybta kore oo aadka ugu dhaw kintirka.
« Reply #3 on: September 26, 2011, 03:36:37 PM »
Asc. Haddii doodaan wax yar oo faalo ah ku darsado, waa na kan.
Marka hore waa loo baahan yahay dooda noocaan ah.
Marka xigta, waxa la arka gabdho la leeyahay "waa shar muutooyin" waxana ka muuqata calaamadaha lagu garto dareen badnaan, marka haddii su'aalo la iska weydiiyey waxaa la ogaaday in ay san gabdhahaasi gudneyn 'bootin dheeraa!'
Marka la is bar bar dhigo gabdhaha la guday & kuwa aan la gudin waxa la ogaaday in ay degan yihiin kuwa gudan. Aniguna ma taageersani gudniinka culus iyo kintirleyda kulul, waxaanse raacsa nahay habka sunniga ee saxda ah. Dad ayaana diidan gudniinka sidiisa ba, hase ahaatee iyagu ba gabdhahooda wey gudaan!.
« Reply #4 on: November 13, 2011, 01:58:50 PM »
asc, bacda salaan waxaan idin suaalayaa arrin mawduucan la xiriirta, waxayna tahay gabadha hadii loo gudo sida ugu dambaysa ama qodobka sadexaad ee halka sare aad ku sheegteen (gudniinka culus) ma hubaal baa in aysan wax hamad ah lahayn mise qaar ka mid ah oo himad kacsi leh ayaa jira?. waad mahadsan tihiin walaal.
« Reply #5 on: November 21, 2011, 09:44:54 PM »
Haddii qaabka sadaxaad gabadha loo gudo, waa hubaal in dareenka kacsiga uu yaraado, waa laga yaabaa in waxyar ay dareento laakiin badanaa dhibaatooyinka kale oo kor ku xusan ayaa ka daran.
Umu Cabdul Waduud
Re: GUDNIINKA FIRCOONIGA IYO CAAFIMAADKA
« Reply #6 on: May 12, 2015, 11:09:17 PM »
Asc, alle ha kaa ajar siiyo walaal. su'aal ayaan qabay ku saabsan arinkan.
Hadii lagu ilaawo gabadha ceengerikii lagu tolay oo uu ku jiro eyna ka dareento mar marka qaarkii xanuun iyo barar, muxuu dhibaata mustaqbal ah u keeni karaa ceenkerikaas maxaase kula talini leheed?
« Reply #7 on: May 16, 2015, 05:29:24 PM »
Haddii cingeriga u uqofka dareemayo ama xanuun iyo barar ku haayo waa in laga saaraa, waxuu isku badali karaa nabar ama caabuq ama cillad kalaba wuu keeni karaa, inkastoo takhaatiirta qaar ay yiraahdaan waxyaabaha qaar oo jirka ku dhex milmo kansar ayay keeni karaan laakiin wax la hubo maahan.
Taladayda waa in takhtar u tagaa qofkaa si cingeriga uu dareemayo looga saaro.
« Reply #8 on: May 22, 2015, 05:15:23 PM »
Alle ha kaa ajar siiyo
« Reply #9 on: July 17, 2016, 10:05:04 AM »
Waxaan Cilmi-baaris ku sameeyay Hababka Loo joojin Karo Gudniinka Fircooniga ah,
Natiijadii Kasoo baxdayna Waan idinla Wadaagi doonaa Dhowaan Insha Allaah.
« Reply #10 on: February 04, 2017, 04:14:43 PM »
Allaha kaa jazaaid siiyo wll
Su aashyduna waa sida tan
Hadii gabadha laga jaro afka yar ee clitorska oo kaliye wax kalena lagu sameyn ka wrn ma dareemi kartaa
Views: 40314 September 10, 2015, 04:45:26 PM
Views: 268443 November 02, 2017, 11:13:46 AM
Views: 14589 May 01, 2011, 08:00:58 PM
Views: 14139 May 05, 2011, 01:49:29 PM
Views: 24545 March 31, 2017, 07:43:12 PM